WithDelight Inkomishi Yekhofi Kanye Nososo - Umagazini Design
Inkomishi Yekhofi Kanye Nososo
Inkomishi Yekhofi Kanye Nososo Ukuphatha ukudla okubhalwe usayizi omnandi ohlangothini lwekhofi kuyingxenye yamasiko amaningi ahlukene njengoba kuyisiko lokuphaka izinkomishi zekhofi kanye neTurkey eTurkey, i-biscotti e-Italy, churros eSpain kanye nezinsuku e-Arabia. Kodwa-ke, kumasoseji ajwayelekile lezi ziphatha uslayida zibhekise endebe yekhofi esishisayo bese zinamathela noma zimanzi kusuka kokuchitheka kwekhofi. Ukuvimbela lokhu, le nkomishi yekhofi ine-saucer enama-slots azinikezele ukugcina ukuphathwa kwekofi kusendaweni. Njengoba ikhofi ingenye yeziphuzo ezi-quintessential ezishisayo, ukuthuthukisa ikhwalithi yesiphuzo sokuphuza ikhofi kubalulekile maqondana nempilo yansuku zonke.
Igama lephrojekthi : WithDelight, Igama labaklami : Rana Nur Ozdeslik, PhD, Igama leklayenti : Brown University.
Inkomishi Yekhofi Kanye Nososo Rana Nur Ozdeslik, PhD WithDelight